ဂူဂဲလ်အား ကျေးဇူးတင်၍ အိမ်မှအခမဲ့သင်ကြားရန်အကောင်းဆုံးပညာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရယူပါ
ဒီ၏ဘုံပိုင်းခြေ အိမ်မှသင်ကြားရန်ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များအစုံဆိတ်ကွယ်ရာကြောင်းဖြစ်ခြင်းကနေ ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သောကိရိယာများ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်ကျနေစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် Android နှင့် iOS အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံများသာမကရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှ ၀ င်ကြည့်ရုံဖြင့်မည်သည့်အရာအားလုံးကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်စရာမလိုဘဲတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲမည်သည့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ (သို့) တက်ဘလက်မှမဆို ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းပုံစံဖြစ်သည်။.
အကွာအဝေးသင်ကြားခြင်းအတွက်ဤကိရိယာများသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များသည်များစွာသောငါတို့သိပြီးသား application များဖြစ်သည့် Documents, Spreadsheets နှင့်တင်ဆက်မှုများပါ ၀ င်သည့် Google Drive suite ကဲ့သို့သောအကွာအဝေးသင်ကြားရေးအတွက်ကိရိယာအသစ်များရှိသော်လည်း Jamboard အမည်ကိုတုံ့ပြန်သော Real-time virtual whiteboardငါ Youtube ပေါ်ရှိ androidsisvideo channel သို့ကျွန်ုပ်တင်ခဲ့သောမကြာသေးမီကဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကောင်းတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဒီလင့်ခ်ထဲမှာ၊ အိမ်ကနေသင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးကိုရှာတွေ့နိုင်တာအပြင်၊ ဆရာများအတွက်အထူးစီစဉ်ထားသည့်သင်ခန်းစာပုံစံဖြင့်အကူအညီကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်ဂူးဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့အားရရှိနိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံစိုက်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီသည်တူညီမှုပိုရှိပုံရသော်လည်းအချို့အရာများကို package တစ်ခုသို့မဟုတ် tools of tools တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရှုမြင်ပါကအချို့သော application များသည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့တွင်တကယ့်တန်ဖိုးကိုပေးမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့တွင်ရှည်လျားပြီးမသေချာမရေရာသောပညာရေးဆိုင်ရာသက်တမ်းရှိနေသေးသည့်ဤအကျဉ်းထောင်များ၌ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူး။.
သင်ဒီဂျစ်တယ်အကွာအဝေးသင်ယူခြင်းအတွက်မည်သူကမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ယခုအနည်းငယ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းများရှိသော်ငလျှင်၊ နောက်မှမဟုတ်ဘဲမကြာမီတွင်၊ ဤလေးပုံတပုံတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရာများကိုအနာဂတ်ပညာရေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမှတ်သားထားပါ။ သင်၏သံသယများကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်ရှင်းလင်းသောနေရာများရှိသည် ကဲ့သို့သော အဆိုပါ hastag နှင့်အတူဤချည်ရယူခြင်း #teachfromhome.
Hangouts အစည်းအဝေး အတွက် ပူးပေါင်းဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင်သင်၏အတန်းတစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်သွယ်ပါ အခြားကိရိယာတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်၊
တင်ဆက်မှုအက်ပ်ဖြင့်သင်၏စာသင်ချိန်အတွင်းမေးခွန်းများကို Liveသင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများကို အသုံးပြု၍ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ. ဂူဂယ်လ်ပုံစံများနှင့်သင်၏စာသင်ခန်းအတွက်ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများဖန်တီးပါ. စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းသင်၏အတန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးပါ နှင့် Web ပရိုဂရမ်းမင်း၏ကြိုတင်သိကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲ။ ဆွေးနွေးမှုများကိုအားပေးပါ၊ အလုပ်များကိုသတ်မှတ်ပါနှင့်သင်၏ Google ကျောင်းသားများနှင့် Google ClassRoom နှင့်ပူးပေါင်းပါ.
ဤအခွင့်အလမ်းများအပြင်၊ ဂူဂဲလ်အိမ်တွင်းသင်ကြားရေးအစုံတွင်သင်လည်းအကောင်းဆုံးကိုတွေ့လိမ့်မည် သင်၏ကျောင်းသားများအားလုံး၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
ကဲ့သို့သောကိရိယာများ အလိုအလျောက်စာတန်းထိုး, အသံသတ်ပုံ သို့မဟုတ်သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှ အသံစာရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မျက်မမြင်စာပြခြင်းစသည့် G Suite အထောက်အကူပြုနည်းပညာကိုကျောင်းသားများအားသင်ပေးပါ.
ပြီးရင် PDF ဖိုင်ပုံစံနဲ့ထားလိုက်မယ် အိမ်သုံး ToolKit မှသင်ပေးပါ၊ သင်၌ဤနည်းပညာအသစ်များနှင့်သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်နှင့်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသီးသန့်နဲ့အခမဲ့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်နိုင်ငံမှာတစ်လကျော်ကြာအောင်ချုပ်နှောင်ထားခဲ့တဲ့ဒီသတိပေးပြည်နယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ချွင်းချက်အခြေအနေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အထူးသမတ်လ 15, 2020 ကတည်းက။
ဒီမှာဖိုင် PDF ကိုကူးယူပါ အိမ်မှသင်ကြားရန်အရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုရယူပါ ဒီမှာနှိပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဂူဂဲလ်အား ကျေးဇူးတင်၍ အိမ်မှအခမဲ့သင်ကြားရန်အကောင်းဆုံးပညာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရယူပါ
Android 10 update ကို Nokia 2.3 သို့ထည့်သွင်း
Overlord anime ကို Mass for the Dead အတွက် Android အတွက်အလှည့်ကျတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်